အဘယ်ကြောင့်ငါ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်လာခဲ့တာလဲ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
လေ့လာမှုများ - ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
မွမ်းမံချက် -“ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါငါ porn အပ်"(chicago Tribune, 2018)
ဒီစွဲလမ်းမှု၏နောက်ဆုံးနှစ်များမှတဆင့် porn ကိုငါ့အရသာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေး၊ ရည်းစားရှိထားသည့်အမျိုးသမီးများအားသူမအနေဖြင့်ကြည့်ကောင်းလွန်းခြင်းမရှိသော်လည်းတောင်မှယောက်ျား၊ မိန်းမသည်ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ယောက်ျားလေးကိုရိုက်သည့်နေရာတွင်ယောက်ျားမိန်းမ၊ , လိမ်လည်မှု taboo တစ်ခုလုံးငါ့ကိုအရူးလုပ်။ MILFs လို "ပျော့ပြောင်းပြီး" ညစ်ညမ်းတဲ့အနုပညာအမျိုးအစားတောင်မှငါ့ကိုကလေးတွေရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း၊ နေဆဲ dammit ပါဘူး။
လူပျို၊ ယောက်ျားလေး၊ ငါ porn ဆိုတာလုပ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ငါငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့၊ porn မတိုင်ခင်မှာသာမန်လိင်အကြောင်း၊ ငါသာယာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်သလိုခံစားရတယ်။ ငါနောက်ကျောကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေငါ့ကိုသတိမပြုမိဘဲဤအမှုအရာသည်ဤလမ်းကိုဘယ်လိုသွားပြီကြည့်ဖို့ဆက်လက်။ အခုတော့ရပ်လိုက်ပြီးရင်တောင်ငါဟာဘောလုံးထဲမှာငါ့ကိုကန်၊ ရိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုပျောက်ကင်းစေမည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သော fetishes အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းကျန်ရှိနေ ဦး မည်လား။ permalink
compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ porn သစ်အမျိုးအစားများကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ထုတ်ရှာကြံ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်ပုံစံကြာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုအတွက်တင်းမာမှုကိုဖော်ပြရန်။ ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ, မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ပင်စိုးရိမ်စိတ်သွေးဆောင်ကြောင်းနယူးအမျိုးအစားများလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး, အဘယ်သူ၏တုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သုံးရင်ဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြီးထွားလာသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်, ဒီဖြစ်စဉ်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။
Kinsey Institute မှသုတေသီတွေကဒီဖြစ်စဉ်အစီရင်ခံရန်ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ကြသည်။ 2007 အတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ပိုမိုအစွန်းရောက်သော၊ အထူးပြုထားသောသို့မဟုတ်“ kinky” အကြောင်းအရာများပေါ်ပေါက်လာရန်လိုအပ်လာသည်၊ ထို့အပြင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်နော်မန်ဒိုဂျီ MD သည်သူ၏စာအုပ်တွင်တင်းမာမှုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများနှင့်အကဲဖြတ်အသုံးပြုခြင်း 60 ကျော်လေ့လာမှုများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ဥပမာ, ဒီ 2017 လေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမေးခွန်းအပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စမ်းသပ်ပြီး အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး။ ယခင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်မတူဘဲဤမေးခွန်း ၁၈ ခုပါသောမေးခွန်းလွှာသည်မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအတွက်သည်းခံခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်စစ်ဆေးသောမေးခွန်းနှစ်ခု
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေက ပြusersနာရှိသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာလေ့ရှိပြီးဝတ္ထုအသစ်များကပိုမိုနှိုးဆွနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုအံ့အားသင့်စေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့မင်းအကျင့်ရှိမယ်ဆိုရင်သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကသာမန်ငြီးငွေ့ဖွယ်၊ ဒီစာမျက်နှာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပျောက်ကွယ်သွားစေတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ဥပမာတွေအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အသင်းအဖွဲ့များသည်“ နက်ရှိုင်းစွာ” ချိတ်ဆက်ထားသည့် (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေါင်းမာမာရှိကြောင်းသက်သေပြရန်) အရေးကြီးသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပြသနာများလည်းရှိသည်။ အချို့သောအသင်းအဖွဲ့များသည်သွယ်ဝိုက်မှတ်ဉာဏ်များဖြစ်လာသည် (သတိမေ့ပါ) အချို့ပြတင်းပေါက်များသည်ကလေးဘဝတွင်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရိုက်တာတစ်နည်းနည်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါ်ဆောင်သွားတုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလျှင်, အချို့သောအခြေခံထားကြ၏။ စိတ်ပညာရှင် Norman Doidge သည်ဤဥပမာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပလတ်စတစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောအခန်းတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။ အပြည့်အဝအခန်းသူ့စာအုပ်ကနေ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်။ မကြာသေးမီက Doidge ရေးသားခဲ့သည်:
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ပတ်သက်သောလူမှုရေးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းနှင့်အခြားမတူဘဲလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအတွင်း ၀ င်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ Clinician အနေဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမျှမသိရှိသေးပါ၊ အရသာကညစ်ညမ်းမှုကိုလွှမ်းမိုးနေပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထိတွေ့မှုအဆင့်ဟာအတော်လေးအသစ်အဆန်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဤလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အရသာများသည်အပေါ်ယံသာဖြစ်လိမ့်မည်လော။ ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွယ်ကပ်နေမှာလား။ ”
ဗီဒီယိုက porn ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်သောအခါကအခြားသုတေသီများကလည်းဒီတင်းမာမှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုင်းတာ။ တဦးတည်းကရေးသားခဲ့သည်:
အဘယ်အရာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါ erotica, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပေမယ့်အကျပ်ကိုင်မှုမှငယ်ရွယ်လူကြီးများ (ဆိုလိုသည်မှာ, ကောလိပ်၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစျတှငျအများအားဖြင့်ကျောင်းသားများကို) ၏မကြာခဏထိတွေ့မှု, ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်ခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာရအောငျလှုံ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ , ရှံမုနှင့်ရွံရှာခြင်း, အတားအဆီးမခံစားတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအညီအမျှလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို။ အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့သို့သော် excitatory တုံ့ပြန်မှုများလေ့စေပါတယ်။ ခံစားရလဒ်အဖြစ်မှေးမှိန်နှင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှု (လျော့နည်းဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဆိုလိုသည်မှာ erotica) လက်ခံနိုင်ဖွယ်ပြင်းထန်မှုများခံစားတုံ့ပြန်မှုရေရှည်တည်တံ့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာသည်။
ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ။ porn streaming သည်သိပ္ပံပညာရှင်များကို "supernormal stimulus" ဟုခေါ်သောပုံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများစွာနှင့်မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ခြင်း။ သူတို့သည်အပျော်အပါးကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့“ ခုခံကာကွယ်” ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆိုလိုသည်မှာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ (အချို့အသုံးပြုသူများတွင်) စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းလာသည်။ အသုံးပြုသူသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှာဖွေသကဲ့သို့အမြဲတမ်းမကျေနပ်မှုသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကိုရှာဖွေသည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာစိုးရိမ်စိတ်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတိုးပွားစေသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရာများကိုလုပ်ခြင်းသည်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ဝက်ခြံများကိုခြစ်ရာကြိုးပမ်းရာတွင်အစစ်အမှန်ဘ ၀ ၌၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်ပယ်ရန်မောင်းနှင်ရသောအလွန်ဆိုးဝါးသောစက်ဝန်းကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည် ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ.
ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုသို့သောညစ်ညမ်းသွေးဆောင်မှုများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မကြာခဏဖြစ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ ငါ၏အ fetishes porn-သွေးဆောင်ဖြစ်ပါသလား ဒါပေမယ့်သင်ကလိမ့်မည်ထင်သည်ထက်ပိုရှည်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကပိုကရှင်းပြသည်: အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?
စက်လှေကားလေ့သို့မဟုတ် desensitization ဖြစ်စေခြင်းမှရလဒ်များ။ ဖြစ်ကောင်းနှစ်ဦးစလုံး။ လေ့ တဦးတည်းသီးခြားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ယာယီကျဆင်းသို့မဟုတ်ရပ်နားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်နှင့်ယခုအချိန်တွင်မှယခုအချိန်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လေ့ porn အသုံးပြုသူများသည်အသစ်အဆန်းများနှင့်အရှင်အသစ်ကအမျိုးအစားရှာမောင်း။
Desensitization ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နှစ်လအတွင်းယူစေခြင်းငှါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဓာတုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနှင့် reverse ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကိုရည်ညွှန်းသည်။ အချို့သော dopamine receptors နှင့် opioid receptors လုပ်ပေးကဲ့သို့သောအခြားအပြောင်းအလဲများ, dopamine နဲ့ opioids ကျဆင်းမှု, များထဲတွင်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအရွက် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့နှင့်မကြာခဏတူညီတဲ့ဘက်ဇ် ( 'သည်းခံစိတ်') အောင်မြင်ရန်ကွီးဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်တငျပွ။ စွဲ desensitization ကပါဝင်ပတ်သက်နေစဉ်, desensitization နောက်ကွယ်မှဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် မပါဘဲ အပြည့်အဝလွစွဲကြုံနေရလူတစ် ဦး (အများအပြား အာရုံကြော ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုစိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ ) ။
Desensitization နှင့်လေ့တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲများနှင့်လူစိမ်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်အသစ်သောအမျိုးအစားများထွက်ရှာ porn အသုံးပြုသူများကတိုက်တွန်းကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုသူကသူ၏အဖြစ် (အမြင့်ဆုံးရမယ့်ဥစ္စာကိုပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်သကဲ့သို့ ဆုလာဘ် circuit ကိုအရေအတွက်ကတိုးပွားလာသည်), ယနေ့အင်တာနက်မှအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့တွင်ဗီဒီယိုများပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် kinkier ဗီဒီယိုများ၊ virtual reality porn၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ တရားမဝင်ပစ္စည်း အဆိုပါဘက်ဇ်ရဖို့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုအသည်းအသန်ကြိုးစားနေသည်။
ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး သစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကအသံမြည်မယ်။ တက်သည် Dopamine မီးလောင်မှု သည်အခြားစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများလွန်းလူအပေါင်းတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမကြာခဏအဓိက feature ရာ:
အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု - ကဲ့သို့ ဒုစရိုက်ဖြေ, ရွံရှာ, အရှက်, စိုးရိမ်စိတ် & ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်
ယနေ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြစ်သောကြောင့်လူမဆန်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းဖြစ်ပေါ်သည် ဤမျှလောက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော် နှင့်လူ့ဦးနှောက်ရင်ဆိုင်ကြပါပြီဘာမှထက်ပေါများ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံး. Southpark အထဲတွင်ဖမ်းယူနေတဲ့ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ဤဇာတ်လမ်း။ site ကိုအဖွဲ့ဝင်များကအစီရင်ခံသည်သည်းခံစိတ်တစ်ဦးအနည်းငယ်ဥပမာအောက်တွင်။ အခါအချို့ကိစ္စများတွင်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းသာထင်ရှားဖြစ်လာ အစွန်းရောက်ဆွ၏မရှိခြင်း အချိန်များအတွက်ပြဿနာအလျောက်။ ဒီအကောင်လေးကိုတကယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖမ်းယူ:
က Man ငါအခုထုတ်ထားလိုက်တယ် ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်ဖို့မထင်နိုင် တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၃ လနီးပါးခန့်ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအသက် ၁၂ နှစ်မှဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်နှစ်နှင့်ချီ။ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ထိုအခါငါ fetish ဖိုရမ်များ / Facebook ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ၄ နာရီကြာကြည့်ရတာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆-၇ လကစပြီးငါအနည်းဆုံး ၄ ကြိမ် ၅ ကြိမ်လောက်ငါညဥ့်လုံးတက်လာတယ်၊ ငါတို့ကဒီမှာ ၁၂ နာရီအထက်ပြောနေတယ်။ ၅ နာရီကြာစိတ်ဆင်းရဲစရာဇာတ်သိမ်းပြီးဆုံးပြီ။ နောက်တစ်ခါငါ့ ဦး နှောက်ကဒါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးလုပ်တယ်။ ခင်ဗျားမယုံနိုင်လောက်အောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ လူမှုရေးအရအဆင်မပြေဘူး။
ငါ porn ကိုအလွဲသုံးစားတဲ့အခါတိုင်းအလွန်သေးငယ်သောအရိပ်ရရှိသည်။ ငါနောက်ဆုံးလိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်တူမေထုန်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နေခဲ့ရသည်။ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သောကမ္ဘာ၊ ကျွန်ုပ်၏မှန်ကန်သောစိတ်တွင်ဆွဲဆောင်နိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ငါသံသရာကိုချိုးဖျက်ဖို့အရမ်းခက်ရုန်းကန်နေရတယ်၊ ဒီဟာကကျွန်တော်ချရေးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာ။
porn အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphed ပြီဆိုရင်, တွေ့မြင်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသလား - 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု' ကိုပြောင်းပြန် 'လိင်အရသာ' နှင့်ခွဲခြားရန်အချိန်တန်ပြီ
သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား? - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အမျိုးသားများအတွက်လိင်မှုကိစ္စကိုပလပ်စတစ်ဖြစ်စေသလား
ဒီမှာသည်းခံစိတ်” PDF သောဤပုံပြင်များအများအပြားပါရှိသည်။
ငါ PMO မပါဘဲ ၁၄ ရက်တာပါ၊ ရလဒ်အနေဖြင့်ပိုပြီးမကြာခဏနှိုးဆွရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ လိင်စိတ်တုန်လှုပ်ဖွယ်အပြုအမူအရှိဆုံးအမျိုးသမီးများ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာများမဆိုနှိုးဆွခြင်းကိုခံရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကို porn သည်အမှန်ပင်ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ ယခုပုံမှန်အခြေအနေများတွင်အမျိုးသမီးများကပိုမိုနှိုးဆွလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်မျှော်လင့်မထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာသည် - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါအရူးအမူးစွဲလမ်းစေသောရုပ်ပုံများကသာနှိုးဆွနိုင်လျှင်၊ ငါထင်မြင်ချက်မှာအမျိုးသမီးများသည်လိင်အရဆုံး၊ အတုယောက်ျားများကိုသာဆွဲဆောင်နိုင်သည်ဟုထင်သည်။
ငါဟာပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာပိုပြီးဆွဲဆောင်ခံရလာတာနဲ့အမျှသူတို့ဟာ Fabio နဲ့မတူပေမဲ့သူတို့ကကျွန်မကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လာတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်ငါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မခံရတဲ့အခါသူတို့ဟာသူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ယခုငါရောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင်သူတို့လည်းယုံကြည်ရန်လွယ်ကူသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင် ၂ ဆပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ဆ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄ ဆမှ ၅ ဆအထိညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စများနှင့်အော်ဂဇင်ပမာဏများပြားလာသည်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်ခင်တွယ်တာနေချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့စိုက်ထူမှုကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းသောမဂ္ဂဇင်းများသည်တစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားအခြေခံအားဖြင့်ထိန်းညှိနိုင်သည်။ တကယ်တော့အဲဒါဟာထူးခြားတာမဟုတ်ဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲကို ၀ င်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဒီထက်ပိုပြီးလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါထက်နည်း6လအတွင်းထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမဂ္ဂါဝပ်၊ ပြproblemsနာမရှိပါ။ အွန်လိုင်း porn ၏လအနည်းငယ် ... ချိတ်ဆက်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ porn ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ နောက်စွဲလမ်းမှုကြီးထွားလာခြင်းသည်အင်တာနက်နှင့်အတူလာသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ၂၄၀၀ bps modem နဲ့အင်တာနက်သုံးတယ်။ ငါလိုချင်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာအချိန်ယူမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ရုပ်ပုံများဖြင့်သာစတင်ခဲ့သည်။ pics ကို 1993 bps နဲ့ရယူဖို့အချိန်တော်တော်များများယူခဲ့ပေမယ့်ငါအရမ်းနောက်ကျသွားမှာပါ။ pics ကို download လုပ်ချိန်နှင့်နာရီ။ အလုံအလောက်မရနိုင်ပါ ပုံအားလုံး။ များများမြင်လေလေမြင်လေလေဖြစ်သည်။ ပိုပြီးဂရပ်ဖစ်, ပိုထူးထူးဆန်းဆန်း။ နောက်ထပ်။ နောက်ထပ်။ နောက်ထပ်။ သင်နက်ရှိုင်းစွာသိလိုက်တာနဲ့ ဦး နှောက်ကလိုချင်နေတာပဲ။
ထိုအခါငါ 56k modem ရတယ်။ ဘယ်လောက်ထိဘုန်းကြီးသလဲ။ ငါအရမ်းအံ့သြဖွယ်ယခု pics အရမ်းမြန်တယ်။ 56k ပိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာလာကြပြီနိုင်ဘူး။ အံ့ of စရာကောင်းသည့်အံ့ဖွယ်ရာများ၊ ဆိုဒ်များသည်အခမဲ့ကလစ်များကိုစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။3မှ 10 စက္ကန့်ကြာမြင့်စွာ။ အိုးသူတို့ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလိုက်သလဲ။ Windows 1000 မထွက်ခင်ငါ့မှာ pics ၁၀၀၀ နဲ့ clips ၁၀၀ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီဟာကငါရနိုင်သမျှသောနေ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ windows 100 နှင့် 98k ရှိ protocols အသစ်များသည် connection အားနှစ်ဆမြန်စွာ download ပြုလုပ်စေသည်။ အဆိုပါကလစ်များကြာကြာတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်က "ဒါကပိုကောင်းတယ်!" ၁၀ စက္ကန့်မှ ၃၀ စက္ကန့်ကြာမြင့်သည်။ ဤအပိုပိုပြီးရပြီ။
ဤသည်မြေတပြင်လုံးအချိန်ငါပိုပိုပြီးအစွန်းရောက်များနှင့်အားကောင်း porn မှတက်အပူတပြင်း။
ငါပဲကလစ်များနှင့် pics လုပ်နေတာနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ဤတက်နေခဲ့တယ်။ သငျသညျကအားလုံးကိုမမြင်ရနိုင်ဘူး။ အသစ်ကပိုလွန်ကဲရာတစ်ခုခုကိုအမြဲရှိခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါအသစ်ကပစ္စည်းပစ္စယငျြတယျ, ဒါကြောင့်ပို။ အဆိုပါအင်တာနက်ထောက်ပံ့ရေးအဆုံးမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့နောက်ကျွန်ခံ, bestiality လူများနှင့်ယောက်ျားသို့မဟုတ်ပဲယောက်ျားကြည့်ရှုပါကအကြှနျုပျကိုချွတ်ရဖို့ယူသမျှနှိပ်စက်ညှင်းပန်း: ထိုအခါအစာရှောင်ခြင်း access ကိုအခမဲ့အပြည့်အဝကလစ်များ, အစွန်းရောက် high resolution ကတော့ပုံများ, နှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းပစ္စယလာ၏။ ကျွန်မကလေးက porn လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှပြောပါလိမ့်မယ်။ သော်လည်းငါသည်ဤစွဲလမ်းဖြတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့ဘူး, ငါကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်ရပြီမယ်လို့သေချာဖြစ်၏။ အဲဒီအတွေးနေဆဲငါ့ကို scares ။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော် porn အကြောင်းစဉ်းစားမိတာက "လူကြီးဖြစ်ရင်ပြIfနာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုလုပ်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲကြည့်ကြည့်ပြproblemနာမရှိဘူး။ ဒီအရှိန်အဟုန်ဆက်ပြောသည်။ ငါအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, 15+ နှစ်ပေါင်းအင်တာနက်ကို porn အသုံးပြုမှုပြီးနောက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် Erotic hypnosis porn ။ အိုးဝိုး! အမျိုးသမီးများသည် hypnotist ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သူတို့ပြောသမျှကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ပထမညမှာငါဟာတစ်ညလုံး - တကယ်တစ်ညလုံး - အော်ဂဇင်ကိုနာရီနှင့်နာရီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းတွေလနဲ့ချီလောက်မရခဲ့ဘူး ထိုအခါ biggy ။ ငါ Hypnodommes မှအစည်းအဝေးများရနိုင်ဘူး။ ဗွီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုငါထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ ဒါအံ့သြစရာပဲ။ ငါ hypno ဗီဒီယိုများ, ပုံပြင်များနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တကယ် hypnotization အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ငါအရမ်းဝေးသွားကြောင်းနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ ငါတကယ်ဗီဒီယိုများနှင့် hypnosis များအတွက်ပေးဆောင်စတင်ခဲ့သည်။ ငါအရင်ကဒီလိုမလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒါကနောက်ဆုံးတော့ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ငါ့ကိုရတယ်။ (ကျွန်ုပ်သည်အသက်သုံးဆယ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုဆိုးလာသည်။ )
ဒီစွဲလမ်းမှု၏အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုပို။ ပို။ ရန်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ “ more” လို့ပြောရင်ငါကအရာအားလုံးကိုပိုပြီးဆိုလိုတာ။ ပို။ ပိုမိုအစွန်းရောက်သည်။ ရုံပို။ နောက်ထပ်။ သင်ပို။ ရှိသည်။ ပိုပြီးမှလွဲ။ အခြားအဘယ်အရာကိုမျှကူညီလိမ့်မည်။ ဒါကပြproblemနာပါ။ ငါစွဲ၏အမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာရပ်လို့မရဘူး။ သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော်အကြိမ်များစွာလုပ်ခဲ့တယ် အဲဒီ site တွေကိုမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါပြန်သွားစရာမလိုတော့ဘူးဗွီဒီယိုတွေသိမ်းထားတယ်။ ဒါကတစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်ဆက်လက်မေးမြန်းသောအခြားမေးခွန်းမှာ“ ငါဘာကြောင့်ဒီကိုကြည့်နေတာလဲ။ ဒီထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုငါဘာကြောင့်ဖွင့်တာလဲ” ထိုအခါအတွေးများလာလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ငါ့ကိုအရမ်းဂရုစိုက်တယ်၊ ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲ။ ဒါဟာအမြဲတမ်းပိုပြီးပိုများတယ်၊ ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်နာရီနှင့်နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုနေသည့်မဂ္ဂဇင်းများကြောင့်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကအခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စမ်းကြည့်ဖူးတယ်၊ သဘောကျတယ်၊ ထို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်၊ များစွာသောဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်ကားများနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတူတူမတူမချင်းပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ထို့နောက်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ပြီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်ယောက်ျားအများစုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်သည်။ ဒါပေမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မယောက်ျားနဲ့ထပ်တူထပ်မျှလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာဖြစ်ဖြစ်၊ ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့အမြဲစွဲစွဲလမ်းလမ်းနေတုန်းမှာပဲကျွန်မယောက်ျားတွေရဲ့စွဲမက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲဆောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
အတိတ် 8 သို့မဟုတ်ဒါလ, ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ငါ၏မရှိခြင်း၏အလွန်သတိထားဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါကအနည်းဆုံး 14 နှစ်ပေါင်း porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ငါမကြာမီ 33 ဖြစ်၏။ ငါသည်နောက်ကျပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းပစ္စယသို့တယောက် porn အများကြီးပျက်ဆီးဆုံးရှုံးပါပွီ။ ငါမှာရှိသမျှကိုညစ်ညမ်းထက်အခြား shemales ဖို့ဆွဲဆောင်မဟုတ်, ငါပြုသောအမှုကိုငါတစ်ကြိမ်သာငါတကယ်၏အတွေးကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းနေပါတယ်။ က shemale ညစ်ညမ်းမပါရှိလျှင်, ကသာပြီးပြည့်စုံသောအရာဝတ္ထုသို့အမျိုးသမီးတွေကို degrades ကြောင်းဖြောင့် porn နဲ့အခြားထွက် whacked ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတကယ့်အကြောင်းအရာကပဲပြုလုပ်၏ဆွနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်များနှင့်ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, သောအရာကို porn ရဲ့အရေးမပါဘူးရှင်းပြကြောင်းဤနေရာတွင်ပေါ်ဆောင်းပါးအချို့ကိုဖတ်ရှုနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းအဘို့ထိုသူတို့ဆီသို့ဦးတည်ခြင်းမရှိအစစ်အမှန်လိင် drive ကိုခံစားခဲ့ရပါပြီ။
ငါခဏတာအချိန်ကုန်လာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်သာမန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသာဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်သာမန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမရှုမြင်ချင်ဖြစ်လာသည်။ ငါဘာမှမကြိုးစားဘဲအာရုံစိုက်လို့မရဘူး၊ ပြီးတော့ငါ့လိင်စိတ်လျော့နည်းသွားတာကိုလည်းသတိပြုမိတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအလယ်အလတ်မှပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ အောက်ပါဆေးများကိုသောက်ခဲ့သည်။ Prozac, Celexa, Paxi, ငါဟာ Bupropion အတွက်ယေဘူယျအားဖြင့် Welbutrin မှာပါ။ ကျွန်မအသက် ၁၂ နှစ်ကတည်းကဒီစိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတိုက်လှန်နေရတယ်။ လောလောဆယ်တော့အနည်းဆုံး ၅ ကြိမ်ကနေ ၆ ကြိမ်လောက် fap လုပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ နှစ်အရွယ်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အသက် (၂၀) ​​ဝန်းကျင်ခန့်မှထွက်လာပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်အပြုအမူများမတိုးတက်လာဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံရန် (သို့) ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်အလို့ငှာအင်တာနက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းကကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုကျွန်ုပ်၏နားလည်မှုကိုများစွာထိခိုက်စေသည်ဟုခံစားမိပြီး၊ မကြာသေးမီကကျွန်တော်ဆုံးခဲ့ဖူးသမျှအရှည်ဆုံးဆက်ဆံရေးက။ ငါသူ့ကိုချစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးအတွင်းမှာငါဟာအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုတွေမှာငါခံစားရတဲ့လိင်တပ်မက်မှုကိုတကယ်မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားပါက၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပြန်လည်မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်လိင်အသစ်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်ဆံလျှင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီး၎င်းတို့နှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုမသိရှိပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ပြtroubleနာများစွာရှိပါသည်။ ငါ၌များစွာသောလိင်ရှိသော်လည်းငါသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်သာခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိသည်။ ငါအထီးကျန်နေတုန်း cumming ဆိုတာပြaနာမဟုတ်ဘူး။ ငါဒါအောင်မြင်ရန် porn အများကြီးစောင့်ကြည့်။
ငါ 16 မှာအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်နိုင်အောင်။ ပထမဦးဆုံးအရာကိုမဆိုမှာငါ့ကိုပယ်တယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါ့အအရသာ fetishes ဖွဲ့စည်း၏အချက်ကိုပိုမိုတိကျတဲ့ရတဲ့စတင်။ ငါဒီညစ်ညမ်းကချိတ်ဆက်မရ, တစ်နည်းနည်းနဲ့အဟောင်းတွေရတဲ့၏သဘာဝအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်ယူဆ။ ငါ၏အသတိပေးခြင်းမရှိပဲ, ကသိသာအသွေးအသားအမြိုးသမီးကိုငါ့အမြင်များသို့ကူး seeped နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြှနျုပျကိုလှည့်။ ငါသည်ဤမကြာသေးမီစမ်းသပ်မှုတိုင်အောင်ယုံကြည်နိုင်ဘူး။ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲဒုတိယရက်သတ္တပတ်၌ငါပိုပြီးအမြိုးသမီးမြားရဲ့မကျြနှာနဲ့အသံတွေကိုသတိထားမိလာတယ်။ အများကြီးပို။ ဒီထက်ထို့နောက်2လကြာပြီးနောက်ကမရှိတော့ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရဖို့ငါ့အအတိတ်က fetishes ကြာပါသည်။ (Wow!) တစ်ဦးကအချို့သောတစ်ချက်တစ်တဟီဟီရယ်ငါလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုမုန်းတဲ့အရာကိုတကယ်မုန်းတယ် ငါ့မှာကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါဟာပုံမှန် / ပုံမှန်ဖွားအမျိုးသမီးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကပေါင် ၃၀၀ လောက်ပြောနေတယ်။ ငါကခါးဆစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ချိစ်တဲ့မိန်းမလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါကတကယ့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုသာကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ငါဟာ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံကိုကြည့်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့အ ၀ လွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်မြည်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကငါ့ကိုများများစားစားလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာငါ့အတွက်တကယ်မလုပ်တော့တာကြောင့်ရယ်စရာပါ။ ငါကိုယ်တိုင်သင်“ စောင့်ကြည့်ခြင်း” မပါသည့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေသည်နှင့်အမျှပိုပိုပြီးရောက်ရှိလာသည်။ ကျန်းမာတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရန်သင့်လက်တွဲဖော်ကိုသင့်ထက်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကို fucking လုပ်ရန်စိတ်ကူးရသောအခါ။ အ ၀ လွန်အမျိုးသမီးများကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်ဆံနိုင်သော်လည်းဤ“ voyeur” သဘောထားကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ပုံမှန် porn မြင်ကွင်းမှပုံမှန်ညစ်ညမ်းကြယ်များကိုကြည့်ရုံဖြင့်ငါ့အတွက်လုံလောက်သောကြောင့်၊
ငါ porn မုန်းတယ် ငါဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုအတွက် porn ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါဟာနေ့၏အဆုံးမှာငါ့ကိုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ porn ကိုပိတ်ပင်သင့်တယ်လို့မထင်ပါဘူး ညစ်ညမ်းခြင်းကိုမကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဒါငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်အရက်သမားအများစုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မသောက်ရ၊ မသောက်နိုင်ကြပါ။ ငါ porn နှင့်အတူတူပါပဲ ငါ့အတွက်တော့ဒါဟာမလွယ်ဘူး။ ငါခြံစည်းရိုးကိုဖြတ်ကျော်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်စွဲလမ်းနေသောချောနေသောလျှောစောက်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများက porn ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ပြsomethingနာကသင်တစ်စုံတစ်ရာကိုအလွဲသုံးစားပြုသည့်အခါ၊
ငါ့အတွက်တော့ငါဟာစွဲလမ်းမှုအနည်းဆုံးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဆေးလိပ်မသောက်ဖူးဘူး၊ မသောက်ဖူးဘူး၊ ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အများစုအတွက်အရက်ဒါမှမဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်ဘယ်တော့မှမသုံးဖူးဘူး။ ငါ PMO ငါ၏အအားနည်းချက်ကိုအစက်အပြောက်ခဲ့ပုံရသည်ထွက်လှည့်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ယောက်ျားလေးကငါစွဲလမ်းခဲ့တယ် ထိုအမှုကိုမမြင်လျှင် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကျင့်သည်အပတ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်တည်ငြိမ်မှုသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ P သည် MO ကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ပိုမိုထူးခြားလာသည်။ ထိုသို့အရှိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဒီကြွက်တွေကိုဆုချတိုက်နယ်စက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလီဗာတွေကိုသူတို့မကျမချင်းတွန်းပို့လိုက်တယ်၊ ငါတုန်ခါနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းကိုက်နေတဲ့နေရာနဲ့တူတယ်။ ငါနင့်ရဲ့နိုးကြားမှုပုံစံဟာအရင်ကလိုအပ်တာအပါအ ၀ င်၊ စအိုနှိုးဆွပေးတယ်၊ ငါမြည်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပြီးတော့မျိုးစုံလက်ချောင်းများ, ထို့နောက်ငါ၏အတပြင်လုံးကိုလက်, ထို့နောက်သူမ၏လက်သီးဆီလီကွန်ကစားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းကျော်သွားပြီရှိရာသူကားအဘယ်သူသိသနည်း ဒီလိုအကူအညီမပါဘဲမရှိတော့အော်ဂဇင်နိုင်။ သူတို့အား orgasm ခဲ့ကြပေမည်ကဲ့သို့သောစိတ်ကိုမှုတ်အမျှတင်းမာမှုများ၏ပုံစံလုံးဝကိုငါ့အသိအမြင်လွတ်ကြပြီပုံရသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကအခုအားလုံးပြိုလဲသွားပြီ၊ ငါ့စအိုဝန်းကျင်attrရိယာကဆွဲဆောင်မှုတွေအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ ဒီလူငယ်တွေအားလုံးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့အော်ဂဇင်နှင့် Erectile လုပ်ဆောင်ချက်တွေကုန်သွားတဲ့နေရာမှာ PMO လုပ်နိုင်တာတကယ့်အဖြစ်ဆိုးပါပဲ။ ငါစဉ်းစားသောအခါငါတုန်လှုပ်ပေမယ့်ငါ ဦး ဆောင်ခဲ့ရှိရာရဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအော်ဂဇင်ကိုများစွာယူဆောင်လာပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အထူးသဖြင့်အော်ဂဇင်ဖို့ခဲယဉ်းသည်။ နောက်ကွယ်မှအမြင်တွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်နှိုးဆွမှုမအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်များလည်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သူတို့သိသာထင်ရှားသည့်အချက်များအတွက်ဤနိမိတ်လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါ။